Obi nke m bi na ya, Onyinye Ọhụrụ Nkọwa 2020 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Obi m bi
Obi m bi na ya bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Spanish José María Pérez dere, nke amara aha ya bụ Peridis. E bipụtara ya na 2020 ma debe ya na Spain nke nwere nsogbu nke 1936. Site na mbido, akwukwo a nwere nnabata di nma nke ndi na agu akwukwo na ndi n’edetu akwukwo. N’otu afọ a tọhapụrụ ya, e nyere ya ihe nrite Primavera de Novela.
Odee dere n’okwu mmalite akwụkwọ ahụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke mkparịta ụka ya na onye ọ na-amabughị nwere, onye si na nkpuru nke dọkịta ochie si n’etiti ndi Paredes Rubias. Ọ gwara ya ọtụtụ akụkọ si n’aka ndị ikwu ya, nakwa ụfọdụ ndị agbata obi ya. A na-akwado okwu nke akụkọ a site n'okwu a kwuru, yana akụkọ na ezigbo ndị ji akụkọ jikọtara ya na ụfọdụ akụkọ ifo.
1 Obi M Na-ebi (2020)
1.1 Ezigbo ezinụlọ
1.2 Ezinụlọ Miranda
2.1 Ọrụ dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ
2.2 Ọrụ ndị ọzọ ndị ọkachamara
Obi m bi (2020)
Ọ bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme setịpụrụ na obodo Paredes Rubias, nke dị ná mmalite nke Agha Obodo Spanish. Akwụkwọ bụ haziri en iri ise dị mkpụmkpụ, nke ha na-amalite en June nke 1936 y kwụsị na Ọktọba nke 1941. Ihe nkata ahụ gụnyere ihe odide dị iche iche, ndị na-agabiga ihe isi ike dị iche iche, karịa agha agha.
Akwụkwọ ahụ na-egosi otu ha si ebi ndụ afọ ndị siri ike ka agha ahụ na-aga n'ihu na mgbe nke a mechara, mana na-enweghị olile anya na ihe niile ga-aka mma. Ihe niile na - eme na Spain na - ewute ya, ma ya na ndị siri ike, ndị ga-alụ ọgụ iji zọpụta ya, dabere na ịhụnanya, ezinụlọ na ọchịchọ maka ọdịnihu ka mma.
Obi m bi na ya: ...
Honorio Beato bụ nwanyị di ya nwụrụ ma biri na ụmụ ya nwanyị atọ: Caridad, Esperanza na Felicidad. Ọ bụ dọkịta a ma ama nke na-elekọta ụlọọgwụ na Cubillas del Monte na tupu agha ahụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi nke Spanish Falange. Otu ugboro esemokwu malitere, ha ha kpebiri ịgbapụ n'obodo ahụ iji zere mmegwara enwere ike.
Esperanza bụ otu n'ime ndị isi akụkọ na akụkọ ahụ. Ọ bụ onye ndọrọndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Ngalaba Nwanyị nke Falange na nwanyị na-ahụ n'anya. Na mgbakwunye na ịgbachitere echiche ya, ọ na-enyere ndị enyi ya aka, ọtụtụ n’ime ha mara ha ikpe ọnwụ. N’agbanyeghi mgbanwe nke ndu ya nyere, o kari idebe odimma ndi ozo tupu iche banyere nke ya.
Arcadio Miranda bụ dọkịta na mba, nwoke di ya nwụrụ nwere ụmụ nwoke abụọ, Gabriel na Lucas, na nwa nwanyị aha ya bụ Jovita, onye na-arụ ọrụ dị ka onye nkuzi n’obodo ahụ. Esemokwu ga-emetụta ezinụlọ gị nke ukwuu, na-eyi egwu ọbụna site n'aka ndị ọrịa na ndị maara ha. A ga-ewepụ mmadụ niile n'ọrụ ha ịta ahụhụ ihe ọgbaghara ahụ.
Gabriel ọ bụ a-eto eto dọkịta na a impeccpe ọrụ na Onye Councillor nke City Council. Ọ ga-ezo n'ihi na o si n'akụkụ nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ ga-emechikwa ekpochi. Maka akụkụ ya, Lucas, onye nọ n'etiti oke egwu nke nwanne ya nwoke, akpọrọ, ọnọdụ ọ na-ahụ dị ka ihe ọzọ iji zọpụta ndụ ya, ebe ọ nwere ihe ùgwù maka ọrụ ya.
Akụkọ a metụtara ezinụlọ abụọ, nke Dr. Honorio Beato —Christian na Falangist— na nke Republican Dr. Arcadio Miranda. Ha abụọ amatala onwe ha site n'ọmụmụ ihe ha n'ụlọ akwụkwọ ọgwụ, n'agbanyeghị na ha nwere echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche. Ha na ezinụlọ ha ha biri ụbọchị obi ụtọ n'ehihie nke njem uka, a na-eme kwa afọ maka ụbọchị nke Virgen del Carmen.
N'etiti ememme a, ndị mmadụ niile na-erikọ nri na ite egwu, na-enweghị ịkpa ókè na akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha nọ. Ọ bụ ebe ahụ - Mgbe ọtụtụ afọ gasịrị- Esperanza Beato na Lucas Miranda zutere, Achọpụtara m na ọ bụghị naanị ọbụbụenyi ka ọ ga-eweta. Nke a n'echeghị na ụbọchị ole na ole agha dị egwu ga-amalite, nke ga-agbanwe ihe niile.
Ndị na-emegide gọọmentị bidoro ịbụ ndị na-agba ọchịchị mgba okpuru gaa nọrọ n’isi na inwe olu ha. Mgbe ha weghaara ọchịchị, ha malitere ịkpagbu ndị otu gọọmentị na-apụ apụ. La eziokwu ohuru butere oke ogbaaghara ochichi na agha, nke kpochapụrụ ihe niile dị na ya.
Ọnọdụ a niile dị mgbagwoju anya mere ka ụkpụrụ pụta ìhè na ndị mmadụ; obi ike, ịdị umeala n'obi, ịdị n'otu na ụmụ mmadụ ha tozuru oke nke-uku; karia nkewa ndi ochichi.
José María Pérez —onye na-ede akwụkwọ na onye edemede a maara dị ka Peridis- bịara n’ụwa na Sọnde, Septemba 28, 1941 n’obodo Cabezón de Liébana (Cantabria). Mgbe m dị afọ 3, ezinụlọ ya kwagara Palencia, kpọmkwem n'obodo Aguilar de Campoo, ebe ọ nọrọ ruo mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, ọ kwagara Madrid iji gaa ọmụmụ akwụkwọ mahadum ya na 1969 ọ gụsịrị akwụkwọ dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ. Ọ họọrọ ọrụ a site na mmasị ya na ichebe, nchebe na nnapụta nke ihe nketa ndị Spain.
Ọrụ dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ
Kemgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ rụọla ọrụ na nwughari nke ụfọdụ ụlọ arụsị, ụlọ ihe nkiri, ụlọ, ụlọ, ọba akwụkwọ na ụlọ ọdịbendị. Ruo afọ 40 1977 - 2017 Ọ duziri na Palencia Santa María la Real Foundation maka ihe nketa akụkọ ihe mere eme, nke mere ka ọ nọrọ na ọtụtụ nrụzigharị dị ịrịba ama, dịka, dịka ọmụmaatụ:
Francisco de los Cobos Obí na Úbeda
Ebe obibi ndị mọnk nke Santa María la Real na Aguilar de Campoo
Onye isi obodo Colegio "Vasco de Quiroga" na Mahadum Complutense nke Madrid
Ọrụ ndị ọzọ ndị ọkachamara
peridis bụ nke a nabatara ebe niile maka ọrụ ya dị ka onye na-atọ ọchị, ọrụ malitere na iri afọ asaa. O mere katun mbụ ya dabere na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge ahụ, nke o bipụtara na magazin ahụ Siria SP
Kemgbe 1976 ruo ugbu a, Pérez ebipụta ihe ndị na-atọ ọchị na akwụkwọ akụkọ Obodo. N'ime ọrụ a na-amị mkpụrụ, onye edemede emeela ọtụtụ ihe, na n'ihi ya, ebipụtala akwụkwọ isii nwere ezigbo ihe atụ ya, na-akọwapụta: Peridis 1.2.3. Afọ isii ruo mgbe mgbanwe (1977) na Tụkwasị obi na enweghị nkekọ (1996). O mepụtakwara abụọ eserese katuunu maka TVE.
Site na 2002 ruo 2007 gosiputara usoro TV Igodo nke Romanesque en TVE. Ihe nkiri a nwere oge atọ ebe enyere ọkara elekere nke ihe ncheta dị iche iche. Mgbe ọrụ a gasịrị, Peridis Ọzọkwa ụgbọala mmemme abụọ ọzọ n'otu ọwa telivishọn ahụ, dị ka: Bugharịa Ugwu y Ìhè na ihe omimi nke katidral.
Ọ malitere mbipụta ya na ngalaba edemede na 1977, ọ bụ ezie na ọ bụ na 2014 mgbe o gosipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya: Na-eche eze. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ laghachiri: Ọbụbụ ọnụ nke Queen Eleanor, akụkọ nke na-aga n'ihu akụkọ gara aga. Kemgbe ahụ, o deela akwụkwọ 3 ọzọ: Ọbụna mbibi pụrụ ịbụ olileanya (2017), Nwanyị na-enweghị alaeze (2018) na Obi m bi (2020).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Obi m bi
Menmụ nwoke ndị na-ahụghị ụmụ nwanyị n'anya
Rosa Ribas. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ezi Childrenmụaka